I-Mica Powder, i-Mica Flake, I-Chips zombala - i-Lingshou
Umdibaniso weFlacite yombala
I-Mica flakes zithatyathwe kwiqela leezimbiwa eziselifini, ezibizwa ngokuba yi-mica, ezibandakanya iMuscovite, iphlogopite, i-biotite kunye nezinye. Ngenkqubo yokuvelisa ngobuchwephesha obukhulu, iiminerali ze-mica zahlulwe zangamaqhezu afana nephepha, zahlulwa zangamaqela emibala yemvelo zaza zaqhekeka zaya kuba ziiflowu ezimileyo. Ezi flakes zikhethekileyo zibonelela nge-metallic luster yendalo engenakufezekiswa ngezinye iiminerali ezenziwe nge-enjini. Ngamaqabane afanelekileyo kwimveliso ye-lacquer kunye nepeyinti yelitye kunye nezixhobo eziqinileyo zokuhombisa zestereo zangaphandle kunye nengubo yangaphakathi.
Amagqabantshintshi ePhambili ye-Mica yenkampani yethu: i-20 mesh, 40 mesh, 60 mesh, 80 mesh, 100 mesh, 2005 mesh, 400 mesh, 500 mesh, 600 mesh, 800 mesh, 1000 mesh, 1250 mesh kunye ne-2500 mesh. Inokuphinda ibe yinto ehleliweyo. I-Mica powder luhlobo lwezimbiwa ezingezizo zentsimbi, eziqukethe iintlobo zezithako ezimalunga ne-49% i-SiO2 kunye ne-30% Al2O3. I-Mica ine-elasticity enkulu kunye neepropathi ezinzima. Luhlobo lwesongezelelo se-premium ukulungiselela iipropathi zokufakelwa, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana ne-acid kunye ne-alkali, ukuchasana kwe-corrosion kunye nokubambelela okuqinileyo, njl. Njl. Kusetyenzwa ngokubanzi kwizixhobo zombane, intonga yentsimbi, irabha, iiplastikhi, iphepha, iiplasitiki, ukuphepha, iipende, i-ceramics, izinto zokuthambisa kunye nezinto ezintsha zokwakha kunye namanye amashishini. Ngophuhliso lwetekhnoloji, izicelo ezininzi ezintsha ziya kuphononongwa.
I-Vermiculite luhlobo lweiminerali egalelweyo equkethe Mg kunye ne-degenerates yesibini ukusuka kwi-hydrate ze-aluminium ze-hydrate. Ihlala yenziwa ngokutshintsha kwemozulu okanye i-hydrothermal change of biotite okanye phlogopite. Ihlelwe ngokwamanqanaba, i-vermiculite inokuhlulahlula ibe yi-vermiculite engafakwanga kunye ne-vermiculite eyandisiweyo. Ihlelwe ngumbala, inokwahlula-hlulwa yigolide kunye nesilivere (iimpondo zeendlovu). I-Vermiculite ineepropathi ezigqwesileyo njengokufudumeza ubushushu, ukumelana nokubanda, anti-bacterium, ukuthintela umlilo, ukufakwa kwamanzi kunye nokufakwa kwesandi, njl. Xa iphekwe imizuzu eyi-0.5 ~ 1.0 phantsi kwe-800 ~ 1000 ℃, umthamo wayo unganyuswa ngokukhawuleza nge-8 ukuya kwi-15. Amaxesha, ukuya kwangama-30, kunye nombala otshintshiwe waba yigolide okanye isilivere, wavelisa i-vermiculite eyandisiweyo engasetyenziswayo ene-acid kwaye ingekho mgangathweni ekusebenzeni kombane.
Imibala yeFlakes, ekwabizwa ngokuba ziingceba, iitshiphusi, iiflethi okanye iziqwenga zeqokobhe njl.njl. Ngenkqubo yokuvelisa ngobuchwephesha, iba luhlobo lwezinto ezikhethekileyo ze-hexagonal zento eyenziwe ngathi yishiti eyenziwe yenziwa kwiimveliso ezihonjisiweyo ezisetyenziswa kwiplastikhi kunye nezinto zerabha ngokunyangwa ngamanyathelo ngamanyathelo amaninzi onyango. Ezi flakes zikhethekileyo zibonelela ngendlela enesimbi yendalo kunye nombala oqaqambileyo ohambelana ngokuthe ngqo nomphumo wephethini yendalo kunye nemabula. Iziphumo ezibonakalayo zokubuyela umva kwindalo azikwazi kufezekiswa ngezinye izixhobo. Ke iiflakes zemibala zinceda ukuphucula umgangatho weemveliso zakho ukuba zikhuphisane ngakumbi kwimarike yakho.
Iflegi enemibala edityanisiweyo ikwayaziwa njenge-acrylic flake, i-epoxy flake, i-vinyl chip, umbala wombala. Luhlobo olunye lwee-flakes ezinokuhlanganiswa ezenziwe nge-acrylic resin ngokusebenzisa iteknoloji ekhethekileyo. Inentsebenzo ekhethekileyo yemveliso, ibonisa eyingqayizivele kunye neyakhawulezayo yokwenziwa kwesiphumo ekungenakuthatyathelwa indawo ezinye iiflakes.
I-Lingshou County Xinfa Mineral Co, Ltd, eyasekwa ngo-Epreli, ngo-2002, ikwindawo yeLujiawa Industrial Park, iLingshou County, Hebei, China. Singumenzi oqeqeshiweyo we-super-fine mica powder, i-flakes enemibala, i-flosite flakes, i-vermiculite njl. Ngomthamo wemveliso yonyaka yeetoni ezingaphezu kwe-10,000. Inkampani yethu igubungela ummandla ongama-30,000㎡, indawo yolwakhiwo ithatha ngaphezulu kwe-10,000㎡ kunye neeofisi ezili-1,200㎡. Ngo-2003, inkampani yethu yalinganiswa “njengeShishini lokuGcina isiVumelwano kunye neSithembiso sokugcina” ngu-Hebei wePhondo lamaZiko oRhwebo noRhwebo;
(1) Isithintelo kwifilimu yokupeyinta, ifilayita engacacanga iya kwenza ulungelelwaniso olufanayo, kuze oko kuthintele ukungena kwamanzi kunye nezinye izinto ezinokutsha, kwaye ukuba usebenzisa umgubo wobunzima obuphakamileyo (ubukhulu be-mica powder ubukhulu be-50 times) ...
(1) Ukutshintsha i-Optical Properties ye-Plastics Mica chips kunokubonakalisa kwaye kukhanye imitha e-infrared kunye nokuthwala kunye nokukhusela i-UV, njl........ Ngomgangatho ophezulu omanzi we-mica kwiifilimu zezolimo, kuya kuba nzima ukukhanya ukuphuma. emva kokungena ...
Izixhobo: Ezi zixhobo zilandelayo kufuneka zibekho ngaphambi kokwakhiwa. Zixhaphake kakhulu kwaye unokuzifumana kwiivenkile zokwakha okanye iivenkile zempahla. Isiphuli seRoller Brush Spray ...
I-Mica Flake 2-422
I-Mica Flake 2-076
HAYI. I-1, i-Xinfa Road,, i-Lujiawa Industrial Park, i-Lingshou County, Hebei, China